I-Retreat Enokuthula enechibi lokubhukuda elingaphezulu komhlaba.
(35 okushiwo abanye)
Coatesville, Pennsylvania, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Ruth
Ikhaya elinokuthula nelivulekile endaweni eyi-2 acre enechibi elincane elingaphezulu komhlaba.
Kutholwe imizuzu embalwa ukusuka eLancaster County enhle. Imizuzu eyi-15 kuye kwengama-30 ukusuka ezindaweni ezikhangayo eziningi zasendaweni. I-Philadelphia iqhele ngehora. Kukhona imakethe yasepulazini yama-Amish eduzane. Indawo yethu ilungele imindeni enezingane, izithandani, abahambi bebhizinisi nokunye.
*Ngicela ufunde lonke uhlu ngaphambi kokuthi unqume ukubhukha futhi ungithumelele umyalezo nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo.
Siyakwamukela ekhaya lethu elihle elisendaweni ethule futhi enokuthula.
Ikhishi ligcwele zonke izidingo zokupheka nokuzijabulisa. Igumbi lokudlela linetafula elikhulu elizohlala 6-8. Indawo engaphandle kwegumbi lokudlela inombhede wesikhumba nesihlalo esithokomele esinamashalofu ezincwadi nendawo ethokomele. Kukhona igumbi lokuhlala elengeziwe elinosofa, isihlalo sothando kanye nesikrini esikhulu se-smart TV. I-Wi-Fi kuphela, ayikho i-TV yekhebula.
Igumbi lokulala elikhulu likhulu futhi liyathandeka kakhulu linokukhanya kwemvelo okuningi nophahla oluphakeme kanye nesikrini esikhulu se-smart TV. Futhi inegumbi lokugezela eliyinhloko elinamathiselwe eline-whirlpool tub.
Ekamelweni lesibili kukhona umbhede wendlovukazi ngaphezu kombhede onemibhede emi-2.
Igumbi lesithathu lokulala lincane linombhede olala 2.
Igumbi lokugezela lesibili litholakala ephasishi elinebhavu egcwele usayizi, ishawa,
indlu yangasese, okuyize kanye nekhabethe.
Manje asiphumele ngaphandle. Kuvulandi ongaphambili kunetafula nezihlalo ongahlala kuzo futhi ujabulele futhi eceleni kunengadi encane yombhede ephakanyisiwe enemifino emisha. Ngasemuva kunesitezi esikhulu esine-grill yegesi.
Ichibi liyichibi elincane elingaphezulu komhlaba elehliswa phansi ngesikhathi sasebusika futhi livulwe entwasahlobo, uma isimo sezulu sivuma. Asinaso isikhathi esibekiwe sokuthi sivula nini ichibi entwasahlobo kuya ngokuthi isimo sezulu sinjani. Sizoyivula ngoSuku lweSikhumbuzo. Futhi ngemuva kwegceke kukhona indawo yokucima umlilo ukuze ujabulele futhi sinikeza izinkuni zokubasa.
Uzoba nesitezi esiphezulu sendlu uwedwa kodwa kukhona ifulethi elincane endaweni engaphansi ehlukene futhi kungenzeka ukuthi ichibi kanye negceke kwabelwane nabo. Ivulandi nompheme akuyona indawo okwabelwana ngayo.
Uma unemibuzo ngalo mlayezo kimi ngaphambi kokuthi ubhukhe.
4.91(35 okushiwo abanye)
Le ndlu icishe ibe yimizuzu eyi-10 ukusuka eChambers Lake naseHibernia park, ehlanganisa ukuhamba ngesikebhe, ukudoba,
ukuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo.
Sihlala endlini engumakhelwane futhi sikhona ukuze sinakekele ichibi ngesikhathi sasehlobo noma sikutholele izinkuni ezengeziwe zokubasa umlilo nanoma yini enye ongayidinga. Nakuba siseduze futhi sitholakala ukuze sisize siqinisekise ukuthi uthola ubumfihlo obufunayo.
Sihlala endlini engumakhelwane futhi sikhona ukuze sinakekele ichibi ngesikhathi sasehlobo noma sikutholele izinkuni ezengeziwe zokubasa umlilo nanoma yini enye ongayidinga. Nakuba…